Agasti 2019 | Londoloza Isitimela
Inyanga: Agasti 2019
Ikhaya > Agasti 2019
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Kungakhathaliseki ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ukuthola ukuthi ibhayisikili lakho amagiya kodwa namanje ejabulela ebabazekayo ngebhayisikili imizila, noma amaqhawe 1,800km Ukugibela kusukela Canterbury eRoma, yethu 5 Kuhle Cycling Trails Ukuze Kwekuheha EYurophu ngeke usinga! Lo mbhalo ubhalwe…
10 Izinsuku Switzerland Izikhangibavakashi uhambo
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi abahambi Sexy ukwazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba abe uhambo ezinhle. Nge ukubhekisisa kahle kumephu, uhlelo okuqinile yezokuthutha, futhi okubaluleke kakhulu, imisebenzi emangalisayo - sewulungile yakho 10 izinsuku Switzerland travel. Futhi Okwalapho usohambweni yeziNguquko eYurophu, a…
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Ongenayo ingathanda ukulondoloza imali uma kungenzeka, ikakhulukazi kwezokungcebeleka? Ukuhamba kungase kubize, kodwa ukuthenga ithikithi lakho Isitimela Gcina Isitimela futhi uhlela ngosizo yethu, ungakwazi yehlisa izindleko. Yonga imali ngenkathi kuhanjwa nalezi 10 amathiphu…
Kuhle Canal Futhi River Isikebhe Amaholide EYurophu
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Abavakashi ufuna Kuhle Canal futhi River Isikebhe Amaholide eYurophu ungakwazi aphumule lula ukwazi IYurophu inenye futhi nokuzwa kakhulu. Nokho, ukwazi lapho ukuya for the best ngomkhumbi iholide wake, Okufanele ukwenze ucwaningo. Kukhona amazwe amahlanu nge fantastic canal…
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, ...
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi Unokuthula futhi kujabulise. Amagama amabili ongawezwa abazali besebenzisa lapho betshela izindaba zabo zokuhamba ngamaholide nezingane. Ngakho, sinqume ukukunikeza amathiphu abaluleke kakhulu wokuhamba ngesitimela nezingane eYurophu. Kukhona nje okuthile ngezitimela okutholisa izingane…
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Ukuvakashela iwayini izifunda eYurophu iphupho lawo wonke connoisseur iwayini. izivini ngokumangalisayo enkulu, sezulu efudumele futhi libalele, emagqumeni enchanting, nokudla okuhle ichaze kulezi zifunda iwayini phezulu. Uma ungumthandi wewayini futhi ufuna ukubona ama-Wineries ahamba phambili eYurophu nokuthi kanjani…